Iza no mamaritra ny haitao amin'ny orinasanao? | Martech Zone
Iza no mamaritra ny haitao amin'ny orinasanao?
Alarobia, Jolay 8, 2009 Alahady 9 Febroary 2014 Douglas Karr
Ny famaritana ny teknolojia dia:
ny fampiharana ny siansa azo ampiharina amin'ny varotra na indostria
Fotoana lasa izay dia nanontany aho hoe:Raha namono fanavaozana ny departemantanao IT". Fanontaniana iray izay nangataka valiny! Sampan-draharaha misahana ny informatika maro no manana fahaizana manafoana na mamela ny fanavaozana… afaka manakana na mamela ny famokarana sy ny varotra ve ny sampana IT?
Androany, nahafinaritra ahy ny nihaona tamin'i Chris avy famintinana. Resadresaka feno aingam-panahy izany ary nandeha an-tongotra 45 minitra lasa izay izahay no naniry.
Ny iray amin'ireo sanganasa mahaliana amin'ny resaka dia ny firesahana momba ny tompon'ny fanapahan-kevitra hividy sehatra na serivisy SEO. Samy nisento izahay roa rehefa tonga teo am-pelatanan'ny solontena IT io fanapahan-kevitra io. Tsy manandrana manaratsy endrika ireo matihanina amin'ny IT mihitsy aho - miankina amin'ny fahaizan'izy ireo isan'andro. Mitoraka bilaogy ho an'ny SEO paikady ahazoana fitarihana… a andraikitra ara-barotra.
Na izany aza, manitikitika ny saina ny hoe ny sampan-draharahan'ny informatika dia matetika no miandraikitra ny sehatra na fizotrany mamaritra ny valin'ny orinasa. Imbetsaka aho no mahita ny valin'ny orinasa (fanavaozana, fiverenana amin'ny fampiasam-bola, fanamorana ny fampiasana, sns.) Maka seza aoriana amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana.
Amin'ny fisafidianana anay ho toy ny sehatra fitorahana bilaogy ataon'izy ireo, matetika ny departemanta IT no mino fa afaka mampihatra a maimaim-poana vahaolana amin'ny fitorahana bilaogy. Ny bilaogy dia bilaogy, sa tsy izany?
Tsy maninona ka fa ny atiny tsy voatsara
Tsy maninona ka fa ny sehatra tsy azo antoka, tsy miovaova, tsy misy fikojakojana, miverimberina, sns.
Tsy maninona ka fa ny sehatra dia tsy azo zakaina amin'ny fomba fijerin'ny pejy an-tapitrisany sy mpampiasa an'aliny.
Tsy maninona ka fa ny orinasa nanangana azy dia nandany dolara an-jatony tamin'ny fikarohana sy fampandrosoana mba hahazoana antoka fa nampidirina ny fomba fanao tsara indrindra sy ny fanarahana ny motera fikarohana.
Tsy maninona ka fa ny interface interface dia tsotra ho an'ny olona rehetra, tsy mila fampiofanana be loatra.
Tsy maninona ka mandeha ho azy ny rafitra ka tsy ilaina ny fahalalana momba ny fanondroana sy ny fanasokajiana.
Tsy maninona ka ny mpiasa ao aminay dia manara-maso ny fandrosoan'ny mpanjifantsika mba hiantohana ny fahombiazan'izy ireo.
Tsy maninona ka fa ny sehatra dia miaraka amina coaching mitohy hanampiana ireo bilaogera hampivelatra ny fahaizany ary hampitombo ny fiverenany amin'ny fampiasam-bola rehefa mandeha ny fotoana.
Miaraka amin'ny SEO, dia matetika io hevitra io ihany. Izaho dia teo amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny adihevitra SEO, nilaza izany taminao tsy mila manam-pahaizana SEO ianao. Nampahatsiahy ahy an'ity lahatsoratra ity i Jeremy… doh!
Ny tiako holazaina dia ny orinasa be loatra izay TSY MISY fanatsarana ny motera ary tsy mahita fivezivezena mifandraika amin'izany. Raha nanao ny fotsiny izy ireo kely indrindra, azon'izy ireo farafaharatsiny nametraka an'io tranonkala tsara tarehy nandaniany $ 10k teo imason'ny mpitsidika vitsivitsy. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana ho an'ny ankamaroan'ny orinasa tsy manana fifaninanana ary tsy misy fanatsarana ... fangatahana ny farafaharatsiny mba hanao ny kely indrindra.
Ho an'ireo orinasa amin'ny indostrian'ny fifaninanana, na izany aza, 80% optimised dia tsy akaiky akory. 90% tsy ampy. Ny fahazoana ny laharana faha-1 amin'ny fe-potoana tena mifaninana dia mitaky fahaizana iray amin'ireo orinasa vitsivitsy eto an-tany. Raha ao amin'ny pejin'ny valin'ny maotera fikarohana mifaninana antonony ianao, dia tsy hahatonga anao any amin'ny # 1 ny sampana IT-nao. Ho tsara vintana ianao raha mahazo anao amin'ny pejy voalohany amin'ny valiny aza.
Tsy hametraka ny sampan-draharahan'ny informatikao ho tompon'andraikitra amin'ny ekipan'ny varotrao ianao, kanefa apetrakao ho tompon'andraikitra amin'ny haitao izy ireo izay mety hisakana ny orinasanao tsy hahazo varotra. Raha hampihatra ny teknolojia amin'ny fomba ara-dalàna ianao… alao antoka fa manadihady tanteraka ny fotoana mety sy ny tombony alohan'ny hieritreretanao fa mahavita irery azy ianao!
Ny Marketing Marketing stratejika maharitra dia mitaky fahasahiana
ExactTarget dia mitazona ny serivisy ho an'ny mpanjifa ho lehibe (ara-tsosialy)
Jul 10, 2009 amin'ny 2: 21 AM
Misy ny maha samy hafa ny fitorahana bilaogy sehatra ary SEO tetika.
Ny sehatra fitorahana bilaogy dia fitambarana rindrambaiko sy hardware fotsiny, ary ny sampan-draharahan'ny IT dia tena mahay manambatra azy ireo. Betsaka ihany koa ireo mpivarotra manao an'io asa io, na noho izy ireo manana logiciel manokana, na noho izy ireo efa manana na manofa fitaovana, na noho izy ireo manana fahaizana be amin'ny fikojakojana an'ity stack IT manokana ity. Ny fanontaniana momba ny fomba fisarahanao ny fitantanana ny sehatra fitorahana bilaogy eo amin'ny olona ao an-trano sy ny olona avy any ivelany dia ny olana IT "mividy / manorina / mindram-bola" kanonika.
Ny paikady SEO, na izany aza, dia saika tsy miankina tanteraka amin'ny sehatra fitorahana bilaogy. Afaka manana SEO lehibe na mahatsiravina ianao na inona na inona sehatra. Fa ny fampiasana orinasa SEO dia tsy toy ny fampiasana orinasa IT an'ny antoko fahatelo. Toy ny manakarama mpanao kopia afaka mandika ny hevitrao amin'ny fitenin'i Google izany.
Azo antoka fa afaka mampiasa rindrambaiko famahanana bilaogy malalaka sy malalaka ianao. Ary aoka isika hanao ny rariny, Doug—WordPress dia mandeha amin'ny fotodrafitrasa azo antoka, marin-toerana, ary tena tafahoatra. Ny mpampiasa WordPress dia ahitana ny Dow Jones, The New York Times, People Magazine, Fox News ary CNN — izay rehetra mandalo ny fitsapanao "jereo pejy an-tapitrisany, mpampiasa an'aliny". Automattic (ireo olona manao WordPress) dia manana am-polony tapitrisa famatsiam-bola, izay heveriko fa teti-pikarohana sy teti-bola be dia be. WordPress dia tsy kilalao.
Na izany aza, WordPress dia sehatra fitorahana bilaogy fotsiny. Raha ny marina, dia fotsiny antsasany sehatra fitorahana bilaogy — ny rindrambaiko WordPress open-source (na dia tsy tambo isaina aza ny serivisy fampiantranoana WordPress, anisan'izany ny WordPress.com.) Raha liana amin'ny ambaratonga azo itokisana na scalability ianao, dia mila mampiasa vola amin'ny fitaovana sy ny fahaiza-manao mifandraika amin'izany.
Noho izany, marina ny departemanta IT fa bilaogy fotsiny ny bilaogy ary afaka mampiasa fitaovana maimaim-poana izy ireo mba handehanan'ny ampahany amin'ny bilaogy. Saingy ny ankamaroan'ny asa sy ny ankamaroan'ny sanda mety dia tsy ao amin'ny rindrambaiko. Saika ny teboka manontolo amin'ny fananana bilaogy dia azo atao amin'ny alàlan'ny paikady SEO feno sy mitohy. Ary rehefa tsapanao fa izany no ilainao dia zavatra tokony ho vonona ny handoa izany ianao.
Ny fanamby dia ny hahatonga ny sampan-draharahan'ny IT hahatsapa fa ny SEO tsara dia tsy tetika adaladala vitsivitsy, fa sarotra izany, miova foana izy io, ary mahatonga ny fiovana rehetra eto amin'izao tontolo izao.
Jul 10, 2009 amin'ny 2: 52 AM
Tsy azoko antoka na manaiky na tsy mitovy hevitra amiko ianao. Izaho sy ianao dia mahafantatra fa ny Dow Jones, The New York Times, People Magazine, Fox News ary CNN dia tsy mampiasa WordPress 'toy ny misy'. Izy ireo dia mitantana izany tsy misy vidiny fanampiny amin'ny fotodrafitrasa, ny vidin'ny fampivoarana lohahevitra, ny vidin'ny milina fikarohana, sns.? Heverinao ve fa tsy mandany vola amin'ny fampianarana ny mpiasany amin'ny fampiasana ireo sehatra ireo izy ireo? Sa fampandrosoana hampita votoaty amin'ireo sehatra ireo? Mazava ho azy fa izy ireo! Ny tsirairay amin'ireo orinasa ireo dia nampiasa vola kely mba hahatonga ny sehatra 'maimaim-poana' hiasa ho azy ireo.
Ny bilaogy dia bilaogy fotsiny, fa ny sehatra bilaogy dia TSY sehatra fitorahana bilaogy fotsiny. Ny metatra tanjaky ny teny fototra, ny automatique amin'ny fametahana, ny fanasokajiana ary ny fametrahana votoaty ao amin'ny Compendium dia samy hafa. Mitaky ny mandany fotoana kely kokoa amin'ny fanahiana momba ny 'ahoana' ny bilaogy, ny 'ny fomba' hanatsarana ny votoatiny, ary ny fotoana bebe kokoa amin'ny fanahiana momba ny 'inona' ny bilaogy ny mpampiasa. Tokony hifantoka amin'ny hafatr'izy ireo ny bilaogera mpandraharaha – fa tsy ny sehatra misy azy.
Manome toky anao aho fa misy olona afaka manokatra Compendium ary mandefa intuitively ary hohatsaraina io lahatsoratra io. Tsy izany no mitranga amin'ny WordPress. Ny ankamaroan'ny olona nampianariko manokana ny fomba fanaovana bilaogy amin'ny fomba mahomby amin'ny WordPress dia tsy nahalala ny tsy fahampian'ny lahatsoratra tsirairay.
Indray mandeha, ny fifantohan'ny departemanta IT dia tsy matetika no ifantohan'ny orinasa. Nankasitrahako foana ireo namako IT 'nijery' ny fividianana rindrambaiko mba hahazoana antoka fa tsy mampidi-doza ny orinasa aho; na izany aza, tsy ho afaka hamantatra velively ny tombontsoa azo avy amin'ny sehatra na paikady sy ny fiantraikany amin'ny orinasa izy ireo. Tsy izany no nianarany, na inona no traikefany, na inona no tokony hampiasana azy.
Avelao ny mpandraharaha handray fanapahan-kevitra momba ny raharaham-barotra! Avelao ny IT ho mpanolotsaina azo itokisana azy ireo.
Jul 10, 2009 amin'ny 4: 32 AM
Tsy manaiky na tsy manaiky ny hevitrao ankapobeny aho fa manazava ny hevitrao fotsiny.
Tsy nisy nilaza fa ireo mpampiasa lehibe amin'ny WordPress dia mitantana ny rindrambaiko tsy misy fanamboarana fanampiny sy vidin'ny fotodrafitrasa. Hoy ianao "Aza adino fa ny sehatra dia tsy azo ampitomboina amin'ny fijerena pejy an-tapitrisany sy mpampiasa an'aliny", saingy tsy marina izany. Mazava ho azy fa azo atao ny manitatra ny WordPress (na Blogger, na Drupal na DotNetNuke na Compendium sy ny sisa) amin'ity ambaratonga ity, saingy tsy maintsy mampiasa vola amin'ny fitaovana, rindrambaiko fanohanana ary fahaizana ara-teknika ianao. Ny fanontaniana dia tsy hoe raha izany azo atao, dia na tianao ny hanao izany na raha tianao ny olon-kafa hanao izany aminao.
Eny, sehatra fitorahana bilaogy dia sehatra fitorahana bilaogy fotsiny. Izy io dia fitambarana logiciel sy hardware izay mamokatra bilaogy. Mazava ho azy, manana endri-javatra samihafa ny sasany, ary mety manana lanjany kokoa sy mendrika vola bebe kokoa ireo endri-javatra ireo. Na manana IndyCar ianao, BMW manana endri-javatra feno na kamiao azo itokisana, manana fiara mandeha fiara ianao izay azo entina avy any amin'ny teboka A mankany amin'ny teboka B. Marina ve fa ny sasany amin'ireo fiara ireo dia mety kokoa amin'ny asa sasany? tanteraka. Ny fanontaniana dia hoe: inona no asa ezahinao ho tratrarina?
Azoko antoka fa raha mametraka mpampiasa mifanila amin'ny Compendium ianao sy izay sehatra fitorahana bilaogy open source, ny lahatsoratra ao amin'ny bilaogy Compendium dia hitondra fifamoivoizana bebe kokoa - na dia mitovy aza ny lahatsoratra. Sanda lehibe ho an'ny orinasanao izany! Raha solontena ity tranga fampiasana ity, dia manome toerana fivarotana mahafinaritra ho an'ny CB.
Andeha anefa hodinihintsika Nahoana io lahatsoratra tokana io dia hahazo fifamoivoizana bebe kokoa. Ny antony dia noho ny Compendium ny orinasa manana hetsika paikady mitohy. Manavao ny codebase foana ianao. Mampifandray amin'ny lahatsoratry ny mpanjifa ianao mba hanampiana azy ireo hanangana laza. Mihaona amin'ny mpanjifa ianao ary manome fiofanana sy loharano fanampiny. Mitazona fotodrafitrasa azo antoka ianao. Ny ankamaroany, raha tsy ny ankamaroan'ny tombony amin'ny Compendium amin'ny fitaovana maimaim-poana dia ny serivisy mitohy sy fanohanana omenao ho an'ny rindrambaiko, mpanjifanao ary ny atiny.
Ary indray, tombony mahafinaritra izany ary maro amin'ireo mpanjifanao no faly. Saingy tsy ampahany fototra amin'ny rindrambaiko sy fitaovanao "sehatra fitorahana blaogy" izany. Afaka mahazo vokatra mitovy ianao amin'ny fampiasana rindrambaiko samihafa (saingy asa bebe kokoa izany!) Izany no tena tian'ny orinasa DK New Media atao isan'andro. Na iza na iza mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra momba ny bilaogy orinasa dia mila mahatakatra ireo nuance ireo.
Ny olana fototra eto dia ny fiafaran'ny andraikitry ny departemanta iray ary ny fiaingan'ny an'ny hafa. Tsy misy valiny mora amin'io fanontaniana io. Ny ratsy kokoa aza, raha misy ampahany amin'io tsipika io miampita ivelan'ny orinasa mankany amin'ny mpivarotra antoko fahatelo, manomboka misy elanelana manjavozavo eo amin'ny sampana ary lasa sarotra ny manombana ny loza sy ny tombony. Ahoana no hiarovanao ny manodidina anao raha misy olona any ivelany afaka miditra? Na, avy amin'ny lafiny ara-barotra: ahoana no azonao antoka fa tsy hanakorontana sy hanimba ny marikao ilay mpamatsy sehatra avy any ivelany? Mety ho kely na lehibe ireo risika ireo, saingy tsy aotra.
Azoko antoka fa fanapahan-kevitra maro momba ny teknolojia no raisin'ny IT tsy misy fanajana ny fiantraikan'ny fandraharahana. Saingy mandeha amin'ny lafiny roa ny olana — mila mahafantatra bebe kokoa momba ny IT sy ny mifamadika amin'izany ny mpandraharaha. Ny fiaraha-miasa fa tsy ny fifanoherana dia mahasoa ny rehetra.
Jul 10, 2009 amin'ny 4: 48 AM
Misaotra an'io fanazavana io ry Robby a! Hijoro amin'ny fanehoan-kevitra farany aho. Matoky ny loharanon'ny IT aho ho mpanolotsaina ahy mba tsy hanao zavatra adala aho. Na izany aza, tsy hanome azy ireo ny fanapahan-kevitra farany momba ny sehatra sy paikady izay mahasoa indrindra amin'ny fampivoarana ny orinasa aho. Samy manana ny tanjany avy isika ary mila ampiasaina araka ny tokony ho izy.